तरकारी खेतीमा रमाउँदै युवा - कृषि पत्रिका
मङ्गलबार ०६ माघ, २०७७
कन्चनपुर। शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ बेलडाँडीका वीरेन्द्र चौधरीलाई पैसाका लागि अरुको मुख ताक्नुपरेको छैन । पैसाकै लागि मजदुरी गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने हतारोसमेत छैन । घरकै बारीमा तरकारी खेती गरेर उनले वार्षिकरूपमा रु. आठ लाख बढी आम्दानी गर्दै आएका । विदेशमा दुःख गर्दासमेत गतिलो आम्दानी हात पार्न नसकेका उनले बारीमा तरकारी रोप्न थालेपछि विगतका दुःखका दिन बिर्सेका छन् ।
शुरुमा थारै जग्गामा तरकारी खेतीका गरेका चौधरीले विस्तारै तरकारी खेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल बढाउँदै लगे । हाल स्वामित्वको दुई बिघा जग्गामा उनले तरकारी रोपेका छन् । “परम्परागतरूपमा तरकारी रोप्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “तालिम लिएपछि तरकारी लगाउने तौरतरिका सिकेपछि आम्दानी मात्रै बढेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको कर्जासमेत तिर्न सकिएको छ ।” उनको हिउँदे तरकारी बालीमा आलु, काउली, ब्रोकाउली, गोलभेँडा, खुर्सानी, बन्दा, हरियो सागपातलगायत रहेको छ ।
बेमौसमी तरकारी बालीका रूपमा उनले काँक्रा, लौका, फर्सी, तितेकरेलालगायत प्लाष्टिक टनेलमा लगाएका छन् । बर्खे तरकारीमा तनेबोडी, तितेकरेलाको खेती उनले गर्दै आएका छन् । विदेशको दुःखले स्वदेशमै आयआर्जनमूलक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर तरकारी खेती गरेको उनी बताउँछन् । “कर्जा तिर्न कुनै उपाय थिएन”, उनले भने, “बारीमै मेहेनत गर्न परिवारले सघाए, त्यसपछि आम्दानी बढ्दै गएको छ । मेहेनत गरेपछि जे पनि सम्भव हुँदोरहेछ ।”
उहाँले तरकारी खेतीसँगै बङ्गुर, ब्रोइलर कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरासमेत पालन गरेका छन् । किसान चौधरीजस्तै बेलडाँडी गाउँका २० बढी परिवार तरकारी खेतीमा संलग्न रहेका छन् । तरकारी खेतीमा संलग्न सबैका घरघरमा दुईदेखि चारसम्म मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्नका लागि प्लाष्टिका टनेल निर्माण गरिएका छन् । प्लाष्टिका टनेलसँगै यहाँका किसानले खेतबारीमा तरकारी उत्पादन गरी बेच्दै आएका छन् । सिँचाइका लागि पुरानो गाउँमा कुलो छ ।
त्यसै कुलोको पानी प्रयोग गरी तरकारीलगायतको खेतीमा सिँचाइको व्यवस्था हुने गरेको छ । तीन कठ्ठा जग्गामै गोलभेँडा खेती गरी गत वर्ष रु. ६० हजार आम्दानी हात पारेका तेजबहादुर चौधरीले यस वर्ष गोलभेँडा खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्नुभएको छ । हालसम्म रु. ४० हजार बढीको गोलभेँडा र रु. ७० हजार बढीको काउली उहाँले बिक्री गर्नुभएको छ । “खर्च कटाएर एक सिजनमै गत वर्ष रु दुई लाख आम्दानी हात परेको थियो”, उनले भने, “यस वर्ष तरकारी सप्रिएकाले आम्दानी दोब्बर हुन्छ ।”
बेलडाँडी गाउँका तरकारी खेतीमा संलग्नहरुको आम्दानी रु पाँच लाखदेखि वार्षिकरूपमा रु. १५ लाख बढी हुने गरेको छ । यहाँका युवाहरु विगतमा परिवारको खर्च चलाउनकै लागि वैदेशिक रोजगारी र मजदुरीका लागि भारतमा जाने कार्य गर्दै आएका थिए । तरकारी खेतीबाट गतिलो आम्दानी हुन थालेपछि युवा यसमै रमाउन थालेका छन् । “तरकारी खेती हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान हुरुक्क हुने युवासमेत गाउँमै तरकारी खेती गर्न हौसिन थालेका छन्”, राधा चौधरीले भने, “तरकारी खेतीबाटै सोचेजस्तो आम्दानी हुन थालेपछि विदेशिनेहरु रोकिएका हुन् । विगतमा हुल नै बाँधेर भारततर्फ जानेको लर्को नै लाग्ने गरेको थियो । त्यो तरकारी खेतीले रोकेको छ ।”